समुद्री माल ढुवानी दरहरू बढ्न जारी छ, यहाँ किन छ र त्यहाँको अन्त्य छ...?-Ningbo Judin Special Monofilament Co., Ltd.
ब्रश कटर पार्ट्स
प्लास्टिक बलिंग तार
वाट्सएप / वेच्याट / मोब:+ 86 13586680186
थप्नुहोस्: # Ind इन्ड र टीडी रोड, जीशिang्ग औद्योगिक पार्क, यिनझो जिल्ला, निbo्गबो, 3१315171१XNUMX१, PR चीन
सामुद्रिक माल ढुवानी दरहरू निरन्तर उकालो लागिरहन्छ, यस्तो छ किन र त्यसको अन्त्य छ...?
समय: 2021-11-04 हिट्स: 20
माल ढुवानी दरहरू शरद ऋतु २०२० मा पहिलो पटक बढ्यो, र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मूल्यहरूको लागि 2020 मा चढ्न जारी छ।
धेरै उद्योग विशेषज्ञहरूका अनुसार एक ढुवानी कन्टेनरको लागत नोभेम्बर 80 देखि 2020% बढेको छ र गत वर्षको तुलनामा लगभग तीन गुणा बढेको छ। मूल्य वृद्धिले प्रमुख विश्वव्यापी व्यापार मार्गहरू - वा विश्वको व्यापारिक व्यापारको लगभग 80% - समुद्री, हावा, वा सडक भाडाबाट ढुवानी हुने सबै सामानहरूलाई असर गर्छ।
Covid-19 महामारीले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अनौठो तनावको क्यास्केड जारी गर्‍यो। विगत एक वर्षमा समायोजन भए पनि, मालवाहक कम्पनीहरूले अझै पनि तालाबन्दीले खुलाएको लजिस्टिक हाइड्रासँग संघर्ष गरिरहेका छन्।
हाल, बढ्दो विश्वव्यापी मागको बीचमा कन्टेनर स्पेसको अभावका कारण शिपिंग मूल्यहरू बढ्दै गएका छन्, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मूल्यहरू। यस महँगो तार्किक अवरोधमा योगदान गर्नु भनेको मालवाहक कन्टेनरहरूको विश्वव्यापी विस्थापन, भीडभाड बन्दरगाह, र श्रमिक अभाव, अरूहरू बीचमा हो।
क्षमताको अभावले भाडा कम्पनीहरूलाई दरहरू बढाउन बाध्य पारेको छ, र विज्ञहरू भन्छन् कि यो प्रवृत्ति २०२१ र २०२२ को शुरुमा जारी रहनेछ।
बढ्दो फ्रेट ढुवानी दरहरूको5कारणहरू
महामारी हिट र महासागर भाडा दर बढ्यो, आश्चर्यजनक रूपमा। तर तालाबन्दी सहज भएको र खोपहरू सर्कुलेशनमा, खाली ढुवानी कन्टेनरको बढ्दो मूल्यलाई के बताउँछ?
मुट्ठीभर निरन्तर मुद्दाहरूले माल ढुवानी उद्योगलाई पीडा दिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मूल्यहरू उच्च राख्छ, सहित:
1. विश्वव्यापी ईकमर्स बढ्यो
तालाबन्दी र उत्तेजक जाँचहरूले बढ्दो अनलाइन खर्चको लागि मार्ग प्रशस्त गर्‍यो, बेबी बूमरहरू जस्ता पहिलेको केजी जनसांख्यिकीहरूमा पनि। खर्च गर्ने बानी परिवर्तन हुँदा, बढेको पार्सल भोल्युमले कन्टेनर ठाउँको लागि माग बढाइरहेको छ। डिसेम्बर २०२० मा US-इनबाउन्ड कार्गो मात्रा २३% माथि थियो अघिल्लो वर्षदेखि, समुद्री मालवाहकहरूको पहिले नै कडा क्षमता निचोड गर्दै।
यसैबीच, ठूला ग्लोबल कुरियरहरू र पार्सल लजिस्टिक कम्पनीहरू अन्तिम माइल ईकमर्स डेलिभरीको क्रश ह्यान्डल गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। eCommerce बाट पार्सल भोल्युम 100 सम्म प्रति दिन 2025 मिलियन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पहिले नै तनावपूर्ण, रसद पेशेवरहरूले विश्वव्यापी ईकमर्स वरपर केन्द्रित भविष्यको लागि पुन: क्यालिब्रेट गर्न ओभरटाइम काम गरिरहेका छन्।
2. छिटपुट खुल्ने र बन्द गर्ने
मुख्य बन्दरगाहहरूमा असंगत पहुँचले ढुवानी कन्टेनरहरूमा क्षमता विनियमित गर्न माल ढुवानी कम्पनीहरूलाई गाह्रो बनाउँछ। अर्थतन्त्रहरू उत्पादन उत्पादन पुनः सुरु गर्न इच्छुक छन्, तर विशेष गरी एशियामा नयाँ प्रकोप र बन्दको सामना गर्छन्।
परिवर्तनशील तालाबन्दी कार्यक्रमहरू, फलस्वरूप, पिकअप र डेलिभरीको लागि सामान्य समयतालिकामा बाधा पुर्‍याउँछ। यसको मतलब मुख्य ढुवानी पूर्वाधारमा पहुँच अविश्वसनीय छ, र सामानको प्रवाह अस्तव्यस्त छ।
यो अन-अफ गतिविधिले सामानहरू बन्दरगाहहरूमा निस्कन्छ र डेलिभरी समय ढिलो हुन्छ। जब नयाँ क्षमता उपलब्ध हुन्छ, कम्पनीहरू सञ्चालन व्यवस्थापनमा बढी सक्रिय हुन्छन्, जसले श्रम लागतहरू माथि राख्छ।
3. श्रम अभाव
बन्दरगाह, गोदाम र उत्पादन केन्द्रहरू श्रमिक अभावबाट ग्रस्त छन्। पोस्ट-महामारी सुरक्षा उपायहरूको बावजुद, मानिसहरू पुन: कार्यबलमा सामेल हुन ढिलो भएका छन्।
सुस्त रोजगारी धेरै हदसम्म निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा कमजोर खोप पहुँच र संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रोत्साहन-उत्पन्न आयको कार्य हो। पर्याप्त कर्मचारी बिना, रसद कम्पनीहरूले कम क्षमतामा काम गर्नुपर्छ र क्षतिपूर्ति गर्न मूल्यहरू बढाउनु पर्छ।
4. पोर्ट भीड, बन्दले ढिलाइ सिर्जना गर्दछ
बन्दरगाह भीड, विशेष गरी अमेरिका मा, भाडा पेशेवरहरु को लागी एक प्रमुख समस्या हो। ढिलो जहाजहरूको लागि औसत ढिलाइ लम्बाइ विस्तार हुँदै गर्दा थोरै जहाजहरूले तिनीहरूको डेलिभरी तालिकामा राखिरहेका छन्।
उदाहरणका लागि, अमेरिकाको लस एन्जलसको बन्दरगाहले सन् २०२१ जनवरीमा अपतटीय किनारमा ४२ वटा जहाज लङ्गर गरेको देख्यो - अझै ६० माइल भित्रका प्रत्येक गोदाम पहिले नै भरिएको थियो।
कार्गो भण्डारण गर्न कतै नभई, ठाउँ उपलब्ध नभएसम्म जहाजहरू अपतटीय निष्क्रिय हुन बाध्य हुन्छन्, र अनिश्चित ढिलाइ महँगो हुन्छ।
5. छोटो आपूर्तिमा ढुवानी कन्टेनरहरू
गत वर्ष विश्वभर ढुवानी कन्टेनरहरूको ठूलो विस्थापन देखियो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, धेरै-आवश्यक खाली कन्टेनरहरू कम स्टाफ, भीडभाड, वा लक-डाउन पोर्टहरूमा अड्किएका छन्।
जब कम जहाजहरू अमेरिकी बन्दरगाहहरूमा आइपुग्छन्, कम कन्टेनरहरू एसिया वा युरोपको फिर्ती यात्राको लागि उपलब्ध हुन्छन्। यसले यूएस गोदामहरू र पोर्ट टर्मिनलहरूमा सामानहरूको ठूलो थुप्रोमा परिणाम दिन्छ, जसले गर्दा माल ढुवानी समय समग्रमा ढिलो हुन्छ। नयाँ लोड उठाउने र खाली कन्टेनरहरू छोड्नेहरू सहित, भरिएका बन्दरगाहहरूमा ट्रकहरूको लागि ढिलाइ ढिलो हुन्छ।
नतिजा उपलब्ध कन्टेनरहरूको असंतुलन हो जसले दरहरू उच्च राख्छ।
अघिल्लो: सही लोड!
अर्को: कुन साइज ट्रिमर लाइन मैले प्रयोग गर्नुपर्दछ？
हाम्रो सबैभन्दा नयाँ उत्पादनहरूको बारेमा जान्न पहिलो हुनुहोस्
टेलिफोन: + 86 574 28829858
दायाँ प्रतिलिपि गर्नुहोस् © २०२१ निing्गो जुडिन विशेष मोनोफिलामेन्ट कं, लिमिटेड